QR Code နည်းပညာများ - ဒေတာအကန့်အသတ်များ - ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ - လျင်မြန်သောလမ်းညွှန်
မေ ၂ ရက်၊
QR Code တွင်ဒေတာမည်မျှသိမ်းဆည်းထားနိုင်မည်နည်း။
QR ကုဒ်သည်ထုတ်ကုန်ထုပ်ပိုးမှုနှင့်မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းများတွင်မြင်တွေ့ရသော 2D ပုံစံဘားကုဒ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အများစုသိကြသည်။ ၎င်း၏ပုံစံအပြည့်အစုံမှာ Quick Response ဖြစ်ပြီးဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတွင်အတွင်း၌ encoded လုပ်ထားသောသတင်းအချက်အလက်များအားချက်ချင်းလက်လှမ်းမီစေသည်။
လူတိုင်းလက်လှမ်းမီနိုင်ခြင်းအပြင်၊ ဤကုဒ်များသည်သာမာန်ကုဒ်များထက်ပိုမိုကြီးမားသောအချက်အလက်စွမ်းရည်အပြင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအမှားခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ဤအရာသည်သင်၏စိတ်ထဲတွင်သတိပေးချက်အနည်းငယ်ပေါ်လာနိုင်သည် ဘယ်လိုသတင်းအချက်အလက်တစ် QR ကုဒ်ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ် နှင့် ဘယ် QR code မှာ bytes ဘယ်နှစ်ယောက် encoded လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။
QR Code ဖွဲ့စည်းပုံ
QR ကုဒ်တစ်ခုသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ကျပန်းအနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်စစ်ဆေးသူများ၏ပုံစံတစ်ခုရှိပြီးပဟေuzzleိဆန်သေးသည်။ သို့သော်အနီးကပ်စစ်ဆေးမှုအပြီးတွင်၎င်းတို့သည်အောက်ပါအတိုင်းဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများပါ ၀ င်သည်။
alignmentကုဒ်ကြီးတစ်ခု၏အမှု၌ orientation ကိုအထောက်အကူပြုသောကျပန်းရင်ပြင်များဖြစ်သည်။
အချိန်ကောင်း: ဒေတာပုံစံသည်မည်မျှကြီးကြောင်းအသိအမှတ်ပြုရန်စကင်နာကိုကူညီရန် positioning markers ကြားရှိမျဉ်းကြောင်းများ။
ဗားရှင်းဖြေ - အသုံးပြုနေတဲ့ကုဒ်ဗားရှင်းကိုညွှန်ပြဖို့နေရာချထားတဲ့ရင်ပြင်တွေပတ်ပတ်လည်မှာရှိနေတယ် (ဗားရှင်း ၄၀ ရှိတယ်၊ အဲဒါတွေကအဖြေပေးတယ်။ ) QR ကုဒ်အမျိုးအစားမည်မျှရှိသည် ဟိုမှာ ၎င်းတို့အနက် ၁-၇ သည်စျေးကွက်အတွက်ဖြစ်သည်။
ပုံစံ အင်ဖိုချောချောမွေ့မွေ့ scan လုပ်ရန် error tolerance နှင့် mask ပုံစံအသေးစိတ်ပါသည့် positioning squares များပတ်ပတ်လည်တွင်ရှိသည်။
စကင်နာသည် QR Code ကိုဖတ်ရှုနားလည်ရန်အတွက် Code သည်အမြဲတမ်းစတုရန်းဖြစ်ရမည်။ ဒါ့အပြင်နောက်ထပ်အချက်အလက်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်။
QR Code သည်ဒေတာဘယ်လောက်များများသယ်ဆောင်နိုင်ပါသလဲ။
စံဗားရှင်းတွင်ဒေတာ3KB ပါဝင်နိုင်သည်။ QR ကုဒ်တွင်အတန်းနှင့်ကော်လံအတော်များများပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းပေါင်းစပ်မှုသည်နှစ်ထပ်ကိန်းများဇယားကွက်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ကော်လံနှင့်အတန်းအရေအတွက်အများဆုံးအရေအတွက်မှာ ၁၇၇ ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ၃ KB ဒေတာကိုအပြည့်အ ၀ တွက်နိုင်သည့်စတုရန်း ၃၁,၃၂၉ လုံးသည် ၃၁,329 ဖြစ်သည်။
ဤအသေးငယ်တဲ့ရင်ပြင်များ၏အစီအစဉ်အတိအကျဒေတာ encoding ကခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒါဟာရိုးရာဘားကုဒ်များထက်အတူတူပင်အာကာသအတွင်းပိုမိုဒေတာသိုလှောင်ဘို့တာဝန်ရှိသည်။ သင်သည်မည်သည့်ကော်လံနှင့်အတန်းများမဆိုပေါင်းစပ်နှင့်အတူကုဒ်ဖန်တီးလို့မရပါဘူး။ ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောအရွယ်အစား (သို့) ဗားရှင်း ၄၀ ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ဗားရှင်း ၁ ကုဒ်များတွင် ၂၁ × ၂၁ ဇယားကွက်ရှိသည်။ လာမည့်ဗားရှင်းမှ စ၍ အတန်းနှင့်ကော်လံအရေအတွက်သည်လေးဆမြင့်တက်လာသည်။ ၁၇၇ တန်းနှင့်ကော်လံပါသောဇယားကွက်သည်အကြီးဆုံးဗားရှင်းဖြစ်ပြီး ၄၀ ဖြစ်သည်။ ဒေတာများစွာရှိပါကတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ထုပ်ထားသည့်ရင်ပြင်များကိုပိုမိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ထားရှိခြင်းသို့မဟုတ် ပို၍ စွဲမက်ဖွယ်ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ရှိသည်။
အထက်တွင်ဆွေးနွေးထားသောဤကုဒ်များ၏အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံသည်သိမ်းဆည်းထားမည့်အချက်အလက်ပမာဏကိုမလျှော့ချပါ။ ဤနေရာတွင်တစ်ခုတည်းသောခြွင်းချက်မှာအမှားပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အဆင့်ပိုမိုမြင့်မားသည်, လျော့နည်းဒေတာကုဒ်ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ Code ၏မျက်နှာပြင်changingရိယာကိုပြောင်းလဲခြင်းသည် data များပိုမိုရရှိစေနိုင်သည်ဟူသောအယူအဆမှာ၎င်းသည်ကော်လံများနှင့်အတန်းများကိုမတိုးနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာသာဖွဲ့စည်းပုံကိုဆန့်။
အချက်အလက်များ၏3KB သည်အဖြေဖြစ်သည် ဘယ် QR code မှာ bytes ဘယ်နှစ်ယောက် encoded လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အဖြေဖြစ်ပါတယ် ဘယ်လိုသတင်းအချက်အလက် QR codes တွေကိုထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်.
R QR ကုဒ်များအတွက် #1 ဖြေရှင်းချက်
သင် QR Codes များကိုအွန်လိုင်းတွင်ဖန်တီးရန်လိုအပ်ပါကသင်လုပ်နိုင်သည် QR Code လုပ်ပါ ဒီမှာအခမဲ့!
Pageloot သည် #1 Go-To ဖြေရှင်းချက် QR ကုဒ်များကိုဖန်တီးစကင်ဖတ်ရန်။
Siim သည် Pageloot အတွက်အကြောင်းအရာဖန်တီးသူနှင့်ဘလော့ဂါတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ မူလကအက်စတိုးနီးယားမှယခုစပိန်၏တောင်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းကိုအခြေခံသည်။ သူသည်စပ်သောအစားအစာများကိုကြိုက်။ နည်းပညာနှင့်ပတ်သက်သည့်အရာအားလုံးကိုနေ့စဉ်ရေးသားခဲ့သည် (အိုး၊ ငါတို့ကော်ဖီအကြောင်းပြောခဲ့သလား) ။
100% အခမဲ့။ အကြွေးဝယ်ကဒ်မရှိပါ။
နောက်ထပ် QR ကုဒ်များကိုကြည့်ပါ
နှင့်အတူ QR ကုဒ်များ scan Android
များအတွက် QR ကုဒ်များလုပ်ပါ ပုံများ
အတွက် QR Code စျေးကွက် ပြောင်းပြန်
များအတွက် QR ကုဒ်များလုပ်ပါ iOS Apps များ
QR Code လုပ်ပါ
အပေါ် QR ကုဒ်များ
QR Code စျေးကွက်
အတွက် QR ကုဒ်များ
“ QR Code” ကို DENSO WAVE INC မှကုန်အမှတ်တံဆိပ်အဖြစ်မှတ်ပုံတင်ထားသည်